Kudzoka Ice Rongedza, Knee Kuputira Ne Ice Pack, Cold Therapy Sokisi - Huanyi
Jiangsu Huanyi Industrial Co., Ltd.chinhu chitsva chekitekinoroji. Iyo kambani yakazvipira kuvandudzwa kweiyo gel chando kurongedza zvigadzirwa zvekunaka kwako / hutano uye zvekurapa / zvemitambo kuputira / kumba kuchengetwa kwemazuva ese kunozorodza kupisa uye kutonhora kurapwa kubva muna 2012. Isu tinopa zororo, kurapa kwemuviri uye rubatsiro rwekutanga muhupenyu, Zvigadzirwa zvinosimbiswa neSGS, FDA, CE, REACH, AZO, PROP65, fekitori neBSCI odhita, isu tine zviitiko zvakabatana pamwe neLIDL, ALDI, Wal-mart neDisney.
Jiangsu Huanyi Industrial inyanzvi mune inopisa uye inotonhora gel chando kurongedza munda kwemakore mazhinji, isu tine zvakawanda zviitiko zvetsika yako pfungwa kuva chaiyo, kubatsira kugadzira zvigadzirwa zvako zvine yakakodzera package nzira, zvese zvigadzirwa ndeye 100% kumanikidza kuyedzwa uye 100% track kugadzirwa hurongwa. Vatengesi vedu vese inyanzvi mainjiniya, unogona kutaura navo nezve chero zano kana mushure mekutengesa sevhisi, munhu mumwe anoziva zvakanyanya, saka iva shamwari nesu, nakidzwa nebasa redu kubva zvino.
Nhanganyaya L w Ukobvu Huremu M 40cm 30cn 1.0cm 700g L 50cm 40cm 1.0cm 1100g LL 60cm 50cm 1.0cm 1800g XL 90cm 50cm 1.0cm 2000g Kudzikisa tembiricha yetembiricha yekutonhora bonde. Iyo inotonhorera gel polymer yakafanana neiyo gel polymer mukutonhorera kunama kwevacheche.Iyo gel polymer ine yakakwira mvura yezvinyorwa zvinobata inonatsa kupisa kubva mumuviri wemunhu kuenda kumeti uye inovimba neakakwira kuitisa uye kupararira kweiyo gel polymer kupisa kuita yakanaka. kupisa kuchinjana uye kuendesa ...
Nhanganyaya PORTABLE & CONVENIENT - Iyi waini inotonhorera sleeve yakajeka, compact, uye inyore. Ingoitora kuenda nayo kupikiniki, padziva regungwa, kudzika musasa, kana chero zviitiko zvekunakidzwa nekuzorora nezvinwiwa zvinotonhora kunyange usina bhagidhi rechando. KUSHANDISA KUSHANDISA – Isa chirimwa chemabhodhoro echampagne mufiriji kwemaawa angangoita maviri, uye tsvedza pasherefu kutonhodza zvinwiwa nekukurumidza uye kuzvichengeta zvakanyatsotonhora kwemaawa. Yakakwana kushandisa pawaini, doro, Champagne, nezvimwe Chigadzirwa size: 6.1 x 9.25 Inch Zita: Waini inotonhorera bhegi, ...
Nhanganyaya Kupisa uye Kutonhora Komputa, Reusable, Hapana kuvhuvhuta, Isina-chepfu saizi: 19 * 9cm, 20 * 10cm, 22 * ​​11.5cm Kurema: 120g, 130g, 160g, 180g Chikumbiro Chinoshandiswa pakurapa kupisa uye kutonhora kunobatsira kubvisa maziso akazvimba, anozvitutumadza maziso, sinus kusagadzikana, migraines, inopa kusununguka kwemushonga. Inogona kushandiswa seyakavhara-kuvhara maziso masiki pane tembiricha yemukamuri. Iyo inoratidzika kunge mask, uye zvechokwadi inogona kushandisa sechinhu chinotonhora cheziso, asi usatarise kufunga kwako. Ichi chigadzirwa chakakosha pakupisa compress kana kutonhora comp ...
Nhanganyaya HOTI NEMAHARA KURAPA - Idzi vana gel mapaketi anochinjanisa pakati peinodziya uye inotonhorera compress, ivo vanokurumidza kuita chando uye nyore kushandisa. Isa macheka echando mumvura inopisa kana mufiriji, anogona kushandura zviri nyore pakati pematembiricha uye achachengetedza kupisa kana kutonhora kwenguva yakareba neakapfava epinki. Cold Therapy inobatsira pakunonoka kuyerera kweropa, kurerutsa kubva pakubuda ropa nekuzvimba. Kupisa / Kupisa kurapwa kunobatsira nekumhanyisa kuyerera kweropa uye kucheka kurapa, nekukurumidza kupora kubva inju ...
Nhanganyaya ZVINHU ZVINOGONESA BHUKU RINONYANYA: Kutarisa kwese kumberi nekumashure kwemabvi neyakagadziriswa compression uye inopisa kana kutonhora kurapwa, chando kutonhora mabvi brace zvinobudirira kunoderedza kuzvimba, kurwadziwa uye kuzvimba nekuda kwekuneta kwemhasuru, kukuvara kana kuvhiyiwa. Iyo yakapfava yemabvi brace inopawo zororo rakasununguka kune sprains uye matambudziko, ACL, arthritis, kukuvara kwemitambo, kuvhiyiwa nezvimwe. HOT KANA KUTI CHEMA CHEMAI: Inosanganisira inobviswa gel mapakeji eanopisa kana kutonhora kurapwa. Paki imwe neimwe inotsvedza nyore nyore mu ...
Nhanganyaya Chando chinogona kudzora kuyerera kweropa, kutonhora kurapwa kunononoka kutenderera, kunoderedza kuzvimba, mhasuru spasm uye kurwadziwa. Tevedza RICE system mushure mekukuvara: Zorora: Tora zororo uye dzivisa kushandisa nzvimbo yakakuvara. Ice: Ice nzvimbo yakakuvara nekukurumidza sezvazvinogona, izvi zvinobatsira kudzikisa kuzvimba, kubuda ropa uye kupwanya ipapo ipapo. Compress: Putira nebhandeji, kazhinji chengetedza bhanhire rakasununguka mumakiti ekutanga erubatsiro. Simudza: Chengetedza kukuvara kuri pamusoro pemoyo wako kudzora kuzvimba. Nei Tisarudze? 1 ...
Nei isu tichisarudza gel chando kurongedza kudzikamisa marwadzo? Kunyangwe uine marwadzo ekumusana kubva kuchovha, kana kuti uri kuzvimba zvakanyanya kubva pakuvhiyiwa, ingoshandisa ichi chando kurongedza kwemutsipa uye mafudzi marwadzo. Chigadzirwa chigadzirwa: Gel Pad Ice Pack yeNeck Kukura: 22 * ​​7.5 INCHES Kurema: 800G Yakagadziriswa Logo uye pasuru Chitupa: SGS, FDA, CE, REACH, PROP65, BSCI Iyi gel mapake inoramba ichichinjika mushure mechando, kuti iwe ugogona kuiisa yakatenderedza yako ibvi, fudzi, uye mutsipa. Mushure memaawa mashoma mufiriji, chando kurongedza kwekukuvara g ...
Nhanganyaya Chinyorwa: satin jira rinoumbwa pvc yekumhara Saizi: 47cm dhayamita, 600g Ruvara: yenguva dzose pink, ruvara runogona kugadziriswa kana huwandu hwacho huri pamusoro pe2000pcs Kushandisa: Mushure mekugeza, shandisa kirimu yekubheka zvakaenzana, pfeka chivharo chekugezesa, uye pisa iyo kubheka cap pane yepakati-yakanyanya kupisa mu microwave kwemaminitsi 2-3. Kana iyo tembiricha iri ingangoita 35-45 degrees, pfeka iyo kwemaminitsi gumi nemashanu. Inokodzera mvumo, yekuchengetedza-dhayi, uye yekuchengetedza bvudzi zuva nezuva. Nei Tisarudze? ...
Kunzwisisa, kubvunza kunogamuchirwa kufona chero nguva